ကားအသစ်များတွင်သတိထားသင့်သော Engine ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း ကာလ အပိုင်းအခြား - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > Features > Education > ကားအသစ်များတွင်သတိထားသင့်သော Engine ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း ကာလ အပိုင်းအခြား
ကားအသစ်များတွင်သတိထားသင့်သော Engine ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း ကာလ အပိုင်းအခြား
မျောတျောယာဉျ တငျသှငျးခှငျ့ မူဝါဒမြား ပွောငျးလဲခဲ့ပွီးနောကျ Brand New Car Showroomမြား ရနျကုနျမွို့တှငျ တဈခုပွီးတဈခု ဖှငျ့လာနိုငျသညျ။ နောကျဆုံးပျေါမျောဒယျ အကောငျးဆုံးကားကိုမှ စိတျ ကွိုကျရှေး ခယျြဝယျယူ နိုငျသော အခှငျ့အရေး မြားရှိလာသညျ။ ကမ်ဘာကြျော အမှတျတံဆိပျမြားဖွဈသော BMW, Mercedes-Benz, Ford, Chevrolet, Toyota, Mazda, Hyundai, KIA , Land Rover, Jaguar ကားအသဈ မျောဒယျမြိုးစုံကို ရနျကုနျမွို့တှငျ လှတျလပျစှာဝယျယူနိုငျ ပွီးဖွဈသညျ။
နယျမွို့မြားမှ ကားဝယျလိုသူမြားသညျ ကား စြေးကှကျကွီးမားသော၊ ရှေးခယျြစရာမြား သော ရနျကုနျ ကားစြေးကှကျ သို့သာ ရောကျရှိလာကွသညျ။ ယခငျ အခြိနျက တဈပတျရဈ (Used) ကားတဈစီးကို သိနျး (၃၀၀၀) ကြျော၊ သိနျး(၄၀၀၀) မြှပေးရပွီး ယနေ့ ကားအသဈ တဈစီးကို သိနျး (၁၀၀၀)မှ သိနျး (၁၅၀၀)အတှငျး ရှေးခယျြဝယျယူလာနိုငျသညျ။ စီးပှားရေးမွို့တျော ရနျကုနျသို့ဆငျးပွီး အနယျနယျ အရပျရပျမှ ကားလာဝယျ ကွသညျ။
Used Car မြားကို ယနဝေ့ယျ၍ ယနပေ့ငျ ခကျြခငျြး အမွနျလမျးပျေါတှငျ မောငျးပွီးယူလာရာ တှငျ မညျသညျ့ပွဿနာမြှမရှိပါ။ သို့သျောလညျး Brand New ကား အသဈတဈစီးကို အမွနျ လမျးပျေါတှငျ Highspeed ကီလိုမီတာ 100 km/hr ကြျောတငျပွီး ခရီးဝေးမိုငျ (၃၀၀) ကြျော၊ မိုငျ (၄၀၀)မြှ မောငျးလြှငျ အငျဂငျြ ဘရိတျ ဖမျးပွီး ပကျြစီးခြှတျယှငျးသှားနိုငျပါသညျ။ အငျဂငျြအသဈကို ကငျြ့သားရအောငျ Piston နှငျ့ Rings မြား၊ ဆလငျဒါစလဈ ထဲတှငျ အထိုငျကအြောငျ၊ အငျဂငျြ ဘယျရငျမြား အသားကအြောငျ အငျဂငျြကို တဖွညျးဖွညျး ကငျြ့ယူရပါ သညျ။ အငျဂငျြအသဈတဈလုံးသညျ ခရီးမိုငျ (၁၀၀၀) ကြျော (၁၅၀၀)ခနျ့ မောငျးပွီး လကေ့ငျြ့ မှသာ အထိုငျကသြှားပွီး Highway လမျးပျေါတှငျ အမွနျနှုနျး တငျ၍ မောငျးနိုငျပါသညျ။
Brand New ကားအရောငျးပွခနျးမြားတှငျ ကားလာဝယျသော ပိုငျရှငျအသဈမြား သတိပွုသငျ့ သော Engine Break-in Period အကွောငျးကို တငျပွပေးလိုပါသညျ။ ကားအသဈ စကျ စကျတှငျ အငျဂငျြ အစိတျအပိုငျးမြားနှငျ့ ဂီယာ ဘောကျဈ Drive-train မြားသညျ အားလုံးအသဈဖွဈပါသညျ။ အငျဂငျြ အဓိကအစိတျအပိုငျးမြား ဖွဈသော အငျဂငျြ ဆလငျ ဒါစလဈ ထဲတှငျ လှုပျရှားနသေော Piston နှငျ့ Piston Rings မြား၊ Connecting Rod ဘယျရငျမြား၊ ကရိုငျးဘယျရငျမြား အထိုငျမကြ သေးပါ။ အသားမကြ သေးပါ။
ကငျြ့သားမရသေးသော အငျဂငျြတဈလုံး ကို အငျဂငျြ လညျပတျနှုနျး r.p.m တငျ၍ Load မြားမြားခိုငျး၍မရသေးပါ။ အငျဂငျြအစိတျအပိုငျး မြားကို တိကသြခြောစှာ စကျစားခွငျး (Machining) ပွုလုပျ၍ တပျဆငျ ထားသျောလညျး အစိတျအပိုငျး တဈခုနှငျ့တဈခု အံဝငျခှငျကြ အထိုငျမကနြိုငျသေးပါ။ Piston Rings မြား ဆလငျဒါထဲတှငျ အထိုငျမကသြလို ဘယျရငျ (Bush Bearing)ခွမျးမြားလညျး အထိုငျ မကြ သေးပါ။ အငျဂငျြ အသဈကို အထိုငျမကမြီ Heavy load ခိုငျးလိုကျပါက အပူခြိနျ မွငျ့တကျလာပွီး အငျဂငျြကပျြသှားပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့ဖွဈ သညျကို Engine ဘရိတျဖမျး သညျဟုချေါပါသညျ။ Engine Break-in ဖွဈနိုငျသော ကာလအပိုငျးအခွားကို Break-in Period ဟုချေါပါသညျ။
Engine Break-in Period ကာလ အတှငျး ဆောငျရနျ၊ ရှောငျရနျမြားရှိသညျ။ ခရီးမိုငျ (၁၀၀၀)ကြျော၊ (၁၅၀၀) ခနျ့လကေ့ငျြ့ပွီးမှ အငျဂငျြအသဈကို စိတျတိုငျးကြ အားနာစရာမ လိုဘဲ၊ ညှာစရာ မလိုဘဲခိုငျး၍ရပါသညျ။ Brand New Car Showroom မြားတှငျ ကားအသဈ ၀ယျပါက (Owner Manual Book) ပိုငျရှငျလကျစှဲ စာအုပျနှငျ့ အာမခံသကျတမျး ကတျပွား ပေးပါလိမျ့မညျ။လိုကျနာသငျ့သော သတိပွုသငျ့ သညျ့ အခကျြမြားကိုလညျး ရှငျးပွပါလိမျ့မညျ။ သို့သျောလညျး နယျမှကားလာဝယျသူ မြားသညျ ကားအသဈကို အမွနျလမျး ပျေါတှငျ မောငျးကောငျးကောငျး ဖွငျ့ စမျးသပျမောငျး ကွညျ့ရာမှ အမွနျနှုနျးကီလိုမီတာ (၁၄၀-၁၅၀) အထိ ရောကျသှားလြှငျ အန်တရာယျရှိသညျကို သတိပွု စလေိုပါသညျ။
အငျဂငျြအသဈ တဈလုံး စတငျအသုံးပွု သညျ မှ ပထမမိုငျ(၁၀၀) အတှငျး အငျဂငျြဝိုငျ မြားဖောကျခပြွီး အငျဂငျြဝိုငျအသဈ လဲပေးရပါမညျ။ အငျဂငျြအသဈတှငျ အစိတျအပိုငျးမြား အထိုငျမကြ သေးသဖွငျ့ သတ်တုအမှုနျအစ ကလေးမြား ထှကျလာပါသညျ။ ပထမ မိုငျ(၈၀)မှ မိုငျ (၁၀၀) အတှငျး အငျဂငျြဝိုငျအသဈ၊ ဆီစဈဘူး အသဈလဲ ပေးရပါသညျ။ အငျဂငျြ စတငျနှိုးခြိနျတှငျလညျး အငျဂငျြအတှငျး ခြောဆီမြား ပွနျ့နှံ့ပွီး အပူခြိနျ တကျလာစရေနျအတှကျ စက်ကနျ့(၃၀)ခနျ့ နှိုးထား ရပါသညျ။
အငျဂငျြလညျပတျနှုနျးကိုလညျး (၃၀၀၀-၃၅၀၀) r.p.m အတှငျးသာလညျပတျစရေပါသညျ။ တောငျကုနျး တောငျတကျလမျး မြားကို အလေးခြိနျ အ ပွညျ့ (Full Load) တငျ၍ မမောငျးသငျ့သေးပါ။ အငျဂငျြ ကငျြ့သားရအောငျ လကေ့ငျြ့ပွီးမှသာခိုငျး၍ သငျ့တျော ပါသညျ။ ဒီဇယျအငျဂငျြမြားတှငျ Engine Break– in Period ကာလအတှငျး အငျဂငျြ Speed ကို 2500 r.p.m ထကျကြျော၍ မမောငျးသငျ့ပါ။
အငျဂငျြအသဈတဈလုံးကို ပထမအဆငျ့ မိုငျ(၁၀၀)တှငျ အငျဂငျြဝိုငျလဲပွီးပါက ဒုတိယ အဆငျ့ မိုငျ(၅၀၀) ပွညျ့လြှငျလညျး အငျဂငျြဝိုငျ မြားဖောကျခပြွီး ဆီအသဈ၊ ဆီစဈ ဘူးအသဈ လဲပေးရပါမညျ။ ဒုတိယ Break-in Period ကာလတှငျလညျး အငျဂငျြ၏ Speed ကို 1800 r.p.m နှငျ့ 3500 r.p.m အတှငျးသာ ထိနျးထိနျး သိမျးသိမျး မောငျးနှငျသငျ့ပါသညျ။ မိုငျ(၅၀၀) နှငျ့ မိုငျ(၁၀၀၀)အတှငျးကာလသညျ Pre-Final Break-in Period ကာလဖွဈသညျ။
ထိုအဆငျ့တှငျလညျး အငျဂငျြ Speed ကို အမြားဆုံးမတငျဘဲ 3500 r.p.m အတှငျး ထိနျး၍ မောငျးရပါမညျ။ခရီး မိုငျ(၁၀၀၀) ကြျော(၁၅၀၀) အထိ မောငျးပွီးမှသာ Engine Break-in Period ကာလ ပွညျ့ပွီးဖွဈ၍ နောကျဆုံးအဆငျ့ အငျဂငျြဝိုငျ ထပျမံ၍ လဲပေးရပါမညျ။ အငျဂငျြဝိုငျသုံးစှဲ ရာတှငျ ထုတျလုပျသူ ညှနျကွားထား သော အငျဂငျြဝိုငျ ဂရိတျ အမြိုးအစားကို သုံးစှဲသငျ့ပါသညျ။ အကယျ၍ ထုတျလုပျသူညှနျကွား သော ပိုငျရှငျ လကျစှဲပါ အငျဂငျြဝိုငျ တံဆိပျအမြိုးအစားကို ၀ယျယူ၍ မရခဲ့ပါက အလားတူ ဂရိတျ အဆငျ့ တူသော Synthetic Motor Oil ကို သုံးစှဲ နိုငျပါသညျ။ မိုငျ(1500) ပွညျ့၍ အငျဂငျြဝိုငျ လဲရလြှငျလညျး ဆီစဈဘူး (အငျဂငျြဝိုငျစဈ) လဲရပါမညျ။
Engine Break-in Period ကာလသညျ ခရီးမိုငျ(၁၀၀၀-၁၅၀၀) အတှငျး မောငျးပွီး၍ အငျဂငျြဝိုငျ ခြောဆီ သုံးကွိမျ လဲပွီးမှသာ စိတျခရြသော၊ ကငျြ့သားရသှား သော အငျဂငျြ ဖွဈလာပါမညျ။ Break-in Period ကာလ ကြျောလှနျပွီးမှသာ အငျဂငျြဝိုငျပုံမှနျ လဲလှယျခွငျးကို မိုငျ(၃၀၀၀)မှ (၅၀၀၀) အတှငျး ခိုငျးပွီးတိုငျး ဆောငျရှကျနိုငျပါ သညျ။
ထို့ပွငျ Break-in Period ကာလကြျော လှနျပွီး လြှငျ ထူးခွားသော အသံထှကျခွငျး၊ အငျဂငျြ အပူခြိနျ မွငျ့တကျခွငျး၊ အငျဂငျြပုံမှနျ မဟုတျခွငျး၊ အငျဂငျြအအေး ခံစနဈတှငျ Coolant အရညျယိုစိမျ့ခွငျး၊ အငျဂငျြဝိုငျယို စိမျ့ခွငျးစသော အားနညျး ခြှတျယှငျးခကျြမြား ရှိ/မရှိ သကျ ဆိုငျရာ ကားရောငျးပွခနျး၏ ဆားဗဈစငျတာတှငျ စဈဆေး မှုခံယူသငျ့ပါသညျ။
DEARBORN, MI., JULY 14,2011–2010 Formula Drift Champion and Ford action sports driver, Vaughn Gittin Jr., shows off his drifting skills inaMustang V6 at Ford’s Dearborn Development Center. Gittin Jr. is one of four of Ford’s Action Sports drivers taking part in Ford’s Octane Academy, Ford’s first-ever action sports campaign. Photo by: Sam VarnHagen/Ford Motor Co. (7/14/11)
Engine Break-in Period ကာလအတှငျး အငျဂငျြအစိတျအပိုငျးမြား အသားကစြရေနျနှငျ့ အငျဂငျြ အတှငျးမှထှကျလာ သော သတ်တု အမှုနျအစမြား သနျ့စငျ သှားစရေနျ အငျဂငျြ ၀ိုငျခြောဆီလဲလှယျ ပေးသကဲ့သို့ပငျ Power Drivetrain မှ Transmission Fluid မြားကို လညျး မိုငျ(၁၅၀၀)ပွညျ့ပါက အားလုံး ဖောကျခပြွီး ဆီသဈလဲလှယျရပါသညျ။ Auto-Gear ဖွဈစေ၊ Manual-Gear ဖွဈစေ ဂီယာအသှားမြားကွားမှ ထှကျလာသော သတ်တုအမှုနျအစမြား (Metal Particles) ကို သနျ့စငျသှား စရေနျ Break-in Period နောကျဆုံး ခြောဆီ လဲလှယျ ခြိနျတှငျ Gear Oil (သို့မဟုတျ) Transmission Fluid မြားကိုပါ အသဈလဲလှယျပေးရနျ လိုအပျခွငျး ဖွဈသညျ။
အငျဂငျြအသဈ တဈလုံးသညျ အတှငျး အစိတျအပိုငျး Moving Parts မြားဖွဈသော ပစ်စတငျရိနျး၊ Connecting Rod ဘယျရငျ၊ Camshaft နှငျ့ Valve မြား၊ ကရိုငျးရှပျနှငျ့ မိနျးဘယျရငျမြား အထိုငျကြ အသားကြ သှားမှသာ Engine Break-in Period ကို ကြျောလှနျပွီး အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျနိုငျသော အငျဂငျြတဈလုံး ဖွဈလာပါမညျ။အတှငျးအစိတျအပိုငျးမြား အထိုငျကြ အသား ကသြှားမှသာ ပှတျမှုအားအနညျးဆုံးဖွဈပွီး Fuel Economy ဖွဈသော အမွငျ့ဆုံး Fuel Efficiency ကို ထုတျပေးနိုငျသော ကငျြ့သားရ အငျဂငျြကောငျးတဈလုံး ဖွဈလာပါမညျ။
မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် မူဝါဒများ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက် Brand New Car Showroomများ ရန်ကုန်မြို့တွင် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖွင့်လာနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ် အကောင်းဆုံးကားကိုမှ စိတ် ကြိုက်ရွေး ချယ်ဝယ်ယူ နိုင်သော အခွင့်အရေး များရှိလာသည်။ ကမ္ဘာကျော် အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော BMW, Mercedes-Benz, Ford, Chevrolet, Toyota, Mazda, Hyundai, KIA , Land Rover, Jaguar ကားအသစ် မော်ဒယ်မျိုးစုံကို ရန်ကုန်မြို့တွင် လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင် ပြီးဖြစ်သည်။
နယ်မြို့များမှ ကားဝယ်လိုသူများသည် ကား ဈေးကွက်ကြီးမားသော၊ ရွေးချယ်စရာများ သော ရန်ကုန် ကားဈေးကွက် သို့သာ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ယခင် အချိန်က တစ်ပတ်ရစ် (Used) ကားတစ်စီးကို သိန်း (၃၀၀၀) ကျော်၊ သိန်း(၄၀၀၀) မျှပေးရပြီး ယနေ့ ကားအသစ် တစ်စီးကို သိန်း (၁၀၀၀)မှ သိန်း (၁၅၀၀)အတွင်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူလာနိုင်သည်။ စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်သို့ဆင်းပြီး အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ကားလာဝယ် ကြသည်။
Used Car များကို ယနေ့ဝယ်၍ ယနေ့ပင် ချက်ချင်း အမြန်လမ်းပေါ်တွင် မောင်းပြီးယူလာရာ တွင် မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိပါ။ သို့သော်လည်း Brand New ကား အသစ်တစ်စီးကို အမြန် လမ်းပေါ်တွင် Highspeed ကီလိုမီတာ 100 km/hr ကျော်တင်ပြီး ခရီးဝေးမိုင် (၃၀၀) ကျော်၊ မိုင် (၄၀၀)မျှ မောင်းလျှင် အင်ဂျင် ဘရိတ် ဖမ်းပြီး ပျက်စီးချွတ်ယွင်းသွားနိုင်ပါသည်။ အင်ဂျင်အသစ်ကို ကျင့်သားရအောင် Piston နှင့် Rings များ၊ ဆလင်ဒါစလစ် ထဲတွင် အထိုင်ကျအောင်၊ အင်ဂျင် ဘယ်ရင်များ အသားကျအောင် အင်ဂျင်ကို တဖြည်းဖြည်း ကျင့်ယူရပါ သည်။ အင်ဂျင်အသစ်တစ်လုံးသည် ခရီးမိုင် (၁၀၀၀) ကျော် (၁၅၀၀)ခန့် မောင်းပြီး လေ့ကျင့် မှသာ အထိုင်ကျသွားပြီး Highway လမ်းပေါ်တွင် အမြန်နှုန်း တင်၍ မောင်းနိုင်ပါသည်။
Brand New ကားအရောင်းပြခန်းများတွင် ကားလာဝယ်သော ပိုင်ရှင်အသစ်များ သတိပြုသင့် သော Engine Break-in Period အကြောင်းကို တင်ပြပေးလိုပါသည်။ ကားအသစ် စက် စက်တွင် အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဂီယာ ဘောက်စ် Drive-train များသည် အားလုံးအသစ်ဖြစ်ပါသည်။ အင်ဂျင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သော အင်ဂျင် ဆလင် ဒါစလစ် ထဲတွင် လှုပ်ရှားနေသော Piston နှင့် Piston Rings များ၊ Connecting Rod ဘယ်ရင်များ၊ ကရိုင်းဘယ်ရင်များ အထိုင်မကျ သေးပါ။ အသားမကျ သေးပါ။
ကျင့်သားမရသေးသော အင်ဂျင်တစ်လုံး ကို အင်ဂျင် လည်ပတ်နှုန်း r.p.m တင်၍ Load များများခိုင်း၍မရသေးပါ။ အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်း များကို တိကျသေချာစွာ စက်စားခြင်း (Machining) ပြုလုပ်၍ တပ်ဆင် ထားသော်လည်း အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အံဝင်ခွင်ကျ အထိုင်မကျနိုင်သေးပါ။ Piston Rings များ ဆလင်ဒါထဲတွင် အထိုင်မကျသလို ဘယ်ရင် (Bush Bearing)ခြမ်းများလည်း အထိုင် မကျ သေးပါ။ အင်ဂျင် အသစ်ကို အထိုင်မကျမီ Heavy load ခိုင်းလိုက်ပါက အပူချိန် မြင့်တက်လာပြီး အင်ဂျင်ကျပ်သွားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ် သည်ကို Engine ဘရိတ်ဖမ်း သည်ဟုခေါ်ပါသည်။ Engine Break-in ဖြစ်နိုင်သော ကာလအပိုင်းအခြားကို Break-in Period ဟုခေါ်ပါသည်။
Engine Break-in Period ကာလ အတွင်း ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များရှိသည်။ ခရီးမိုင် (၁၀၀၀)ကျော်၊ (၁၅၀၀) ခန့်လေ့ကျင့်ပြီးမှ အင်ဂျင်အသစ်ကို စိတ်တိုင်းကျ အားနာစရာမ လိုဘဲ၊ ညှာစရာ မလိုဘဲခိုင်း၍ရပါသည်။ Brand New Car Showroom များတွင် ကားအသစ် ၀ယ်ပါက (Owner Manual Book) ပိုင်ရှင်လက်စွဲ စာအုပ်နှင့် အာမခံသက်တမ်း ကတ်ပြား ပေးပါလိမ့်မည်။လိုက်နာသင့်သော သတိပြုသင့် သည့် အချက်များကိုလည်း ရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း နယ်မှကားလာဝယ်သူ များသည် ကားအသစ်ကို အမြန်လမ်း ပေါ်တွင် မောင်းကောင်းကောင်း ဖြင့် စမ်းသပ်မောင်း ကြည့်ရာမှ အမြန်နှုန်းကီလိုမီတာ (၁၄၀-၁၅၀) အထိ ရောက်သွားလျှင် အန္တရာယ်ရှိသည်ကို သတိပြု စေလိုပါသည်။
အင်ဂျင်အသစ် တစ်လုံး စတင်အသုံးပြု သည် မှ ပထမမိုင်(၁၀၀) အတွင်း အင်ဂျင်ဝိုင် များဖောက်ချပြီး အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ် လဲပေးရပါမည်။ အင်ဂျင်အသစ်တွင် အစိတ်အပိုင်းများ အထိုင်မကျ သေးသဖြင့် သတ္တုအမှုန်အစ ကလေးများ ထွက်လာပါသည်။ ပထမ မိုင်(၈၀)မှ မိုင် (၁၀၀) အတွင်း အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်၊ ဆီစစ်ဘူး အသစ်လဲ ပေးရပါသည်။ အင်ဂျင် စတင်နှိုးချိန်တွင်လည်း အင်ဂျင်အတွင်း ချောဆီများ ပြန့်နှံ့ပြီး အပူချိန် တက်လာစေရန်အတွက် စက္ကန့်(၃၀)ခန့် နှိုးထား ရပါသည်။
အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်းကိုလည်း (၃၀၀၀-၃၅၀၀) r.p.m အတွင်းသာလည်ပတ်စေရပါသည်။ တောင်ကုန်း တောင်တက်လမ်း များကို အလေးချိန် အ ပြည့် (Full Load) တင်၍ မမောင်းသင့်သေးပါ။ အင်ဂျင် ကျင့်သားရအောင် လေ့ကျင့်ပြီးမှသာခိုင်း၍ သင့်တော် ပါသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များတွင် Engine Break– in Period ကာလအတွင်း အင်ဂျင် Speed ကို 2500 r.p.m ထက်ကျော်၍ မမောင်းသင့်ပါ။
အင်ဂျင်အသစ်တစ်လုံးကို ပထမအဆင့် မိုင်(၁၀၀)တွင် အင်ဂျင်ဝိုင်လဲပြီးပါက ဒုတိယ အဆင့် မိုင်(၅၀၀) ပြည့်လျှင်လည်း အင်ဂျင်ဝိုင် များဖောက်ချပြီး ဆီအသစ်၊ ဆီစစ် ဘူးအသစ် လဲပေးရပါမည်။ ဒုတိယ Break-in Period ကာလတွင်လည်း အင်ဂျင်၏ Speed ကို 1800 r.p.m နှင့် 3500 r.p.m အတွင်းသာ ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း မောင်းနှင်သင့်ပါသည်။ မိုင်(၅၀၀) နှင့် မိုင်(၁၀၀၀)အတွင်းကာလသည် Pre-Final Break-in Period ကာလဖြစ်သည်။
ထိုအဆင့်တွင်လည်း အင်ဂျင် Speed ကို အများဆုံးမတင်ဘဲ 3500 r.p.m အတွင်း ထိန်း၍ မောင်းရပါမည်။ခရီး မိုင်(၁၀၀၀) ကျော်(၁၅၀၀) အထိ မောင်းပြီးမှသာ Engine Break-in Period ကာလ ပြည့်ပြီးဖြစ်၍ နောက်ဆုံးအဆင့် အင်ဂျင်ဝိုင် ထပ်မံ၍ လဲပေးရပါမည်။ အင်ဂျင်ဝိုင်သုံးစွဲ ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ ညွှန်ကြားထား သော အင်ဂျင်ဝိုင် ဂရိတ် အမျိုးအစားကို သုံးစွဲသင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ထုတ်လုပ်သူညွှန်ကြား သော ပိုင်ရှင် လက်စွဲပါ အင်ဂျင်ဝိုင် တံဆိပ်အမျိုးအစားကို ၀ယ်ယူ၍ မရခဲ့ပါက အလားတူ ဂရိတ် အဆင့် တူသော Synthetic Motor Oil ကို သုံးစွဲ နိုင်ပါသည်။ မိုင်(1500) ပြည့်၍ အင်ဂျင်ဝိုင် လဲရလျှင်လည်း ဆီစစ်ဘူး (အင်ဂျင်ဝိုင်စစ်) လဲရပါမည်။
Engine Break-in Period ကာလသည် ခရီးမိုင်(၁၀၀၀-၁၅၀၀) အတွင်း မောင်းပြီး၍ အင်ဂျင်ဝိုင် ချောဆီ သုံးကြိမ် လဲပြီးမှသာ စိတ်ချရသော၊ ကျင့်သားရသွား သော အင်ဂျင် ဖြစ်လာပါမည်။ Break-in Period ကာလ ကျော်လွန်ပြီးမှသာ အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံမှန် လဲလှယ်ခြင်းကို မိုင်(၃၀၀၀)မှ (၅၀၀၀) အတွင်း ခိုင်းပြီးတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ သည်။
ထို့ပြင် Break-in Period ကာလကျော် လွန်ပြီး လျှင် ထူးခြားသော အသံထွက်ခြင်း၊ အင်ဂျင် အပူချိန် မြင့်တက်ခြင်း၊ အင်ဂျင်ပုံမှန် မဟုတ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်အအေး ခံစနစ်တွင် Coolant အရည်ယိုစိမ့်ခြင်း၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ယို စိမ့်ခြင်းစသော အားနည်း ချွတ်ယွင်းချက်များ ရှိ/မရှိ သက် ဆိုင်ရာ ကားရောင်းပြခန်း၏ ဆားဗစ်စင်တာတွင် စစ်ဆေး မှုခံယူသင့်ပါသည်။
Engine Break-in Period ကာလအတွင်း အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ အသားကျစေရန်နှင့် အင်ဂျင် အတွင်းမှထွက်လာ သော သတ္တု အမှုန်အစများ သန့်စင် သွားစေရန် အင်ဂျင် ၀ိုင်ချောဆီလဲလှယ် ပေးသကဲ့သို့ပင် Power Drivetrain မှ Transmission Fluid များကို လည်း မိုင်(၁၅၀၀)ပြည့်ပါက အားလုံး ဖောက်ချပြီး ဆီသစ်လဲလှယ်ရပါသည်။ Auto-Gear ဖြစ်စေ၊ Manual-Gear ဖြစ်စေ ဂီယာအသွားများကြားမှ ထွက်လာသော သတ္တုအမှုန်အစများ (Metal Particles) ကို သန့်စင်သွား စေရန် Break-in Period နောက်ဆုံး ချောဆီ လဲလှယ် ချိန်တွင် Gear Oil (သို့မဟုတ်) Transmission Fluid များကိုပါ အသစ်လဲလှယ်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်အသစ် တစ်လုံးသည် အတွင်း အစိတ်အပိုင်း Moving Parts များဖြစ်သော ပစ္စတင်ရိန်း၊ Connecting Rod ဘယ်ရင်၊ Camshaft နှင့် Valve များ၊ ကရိုင်းရှပ်နှင့် မိန်းဘယ်ရင်များ အထိုင်ကျ အသားကျ သွားမှသာ Engine Break-in Period ကို ကျော်လွန်ပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်သော အင်ဂျင်တစ်လုံး ဖြစ်လာပါမည်။အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများ အထိုင်ကျ အသား ကျသွားမှသာ ပွတ်မှုအားအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး Fuel Economy ဖြစ်သော အမြင့်ဆုံး Fuel Efficiency ကို ထုတ်ပေးနိုင်သော ကျင့်သားရ အင်ဂျင်ကောင်းတစ်လုံး ဖြစ်လာပါမည်။
PREVIOUS 02 Jul 2018
Buyer’s Guide for Mid-size Sedan
NEXT 04 Jul 2018
၂၀၁၈အတွက် ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆူံး အလှစီးမော်ဒလ်များ
Archive Select Month April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016
The Sales Target Is Exceeded. Pushing The Sales Circulation Of Automobiles To Continually...